Viber မြန်မာဗားရှင်း ထွက်ပါပြီ : Myanmar Mobile Software Developer
ကွန်ပျူတာ အင်တာနက် ဖုံး စတဲ့ အိုင်တီနဲ့ ပတ်သက်တာမှန်သမျှ ကျနော်တို့ မြန်မာစာနဲ့ ထွက်လာတယ်ဆိုတာ တော်တော်လေးကို ရှာပါသေးတယ်။ နိုင်ငံတိုင်း လူမျိုးတိုင်း ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ့်စာပေနဲ့ အရာရာတိုင်းကို ရှိနေချင်ကြတာ သဘာဝပါပဲ။ ကမ္ဘာမှာ ဘယ်ဘာသာစကားကို အဓိကသုံးစွဲရမယ်လို့ သတ်မှတ်ချက် မရှိပေမယ့် အင်အားကြီးတဲ့ ဘာသာစကားကို သုံးနေကြတာ အထင်အရှားပါ။ ကျနော်လဲ လူထဲက လူတစ်ယောက်မို့ ကျနော်တို့မြန်မာစာ မြန်မာစကားကို နေရာတိုင်းမှာ ရှိနေစေချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိနေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဖုံးအလကားခေါ်ဆိုလို့ လွယ်ကူတဲ့ စမတ်ဖုံးများမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ Viber Application ကို မြန်မာမှု ပြုလိုက်ပါတယ်။ အကောင်းကြီးတော့ မဟုတ်ပေမဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားလုပ်ထားပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာများနဲ့ ရင်းနှီးနေပြီးသားသူများအတွက် ကြည့်ရတာ မျက်စိ နောက်ကောင်း နောက်ပေမဲ့ မြန်မာလူမျိုးများအတွက် သင့်တော်မယ်ထင်လို့ မြန်မာဗားရှင်းလေးကို လုပ်ဖြစ်သွားတာပါ။ အနှောက်ယှက်ဖြစ်ရင်တော့ တောင်းပန်ပါတယ်။
တစ်ချို့ကို Language Data အခက်အခဲကြောင့် မြန်မာလို မပြန်ဘဲ ဒီတိုင်းထားခဲ့ရပါတယ်။ အဒီအတွက်လဲ ထပ်ပြီး တောင်းပန်ပါရစေ…နောက်ထွက်မည့် ဗားရှင်းအသစ်တွေမှာ ကောင်းသထက်ကောင်းအောင် ကျိုးစားပါ့မယ်။
Viber မြန်မာဗားရှင်း ဖြစ်ပေါ်လာအောင် အကူညီပေးခဲ့တဲ့ အကို ကိုဧချမ်း (US) ဒီနေရာကနေ အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း ပြောကြားပါရစေ….။
ကျနော် iPhone4နဲ့ 4S မှာပဲ စမ်းရပါသေးတယ်။ တခြား iOS များမှာလည်း သုံးလို့ ရနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အောက်မှာ Download လုပ်ယူကြပါခင်ဗျားး။ IPA ဖိုင်ကို iPhone ထဲကို Install လုပ်နည်းကို ဒီနေရာမှာ ရေးပြီးခဲ့ပါပြီ။
Credit To စာချစ်သူ (www.sarchitthu.com)
About the Author: ဖြိုးချမ်း
Filed in: I OS App, iOS စုစည်းမှု Viber မြန်မာဗားရှင်း ထွက်ပါပြီ
9 Comments on "Viber မြန်မာဗားရှင်း ထွက်ပါပြီ"
Ko Htut says: February 24, 2013 at 12:26 pm Viber က အကောင့်သစ်ဖွင့်လို့ရလို့လား
Reply Ko Htut says: February 24, 2013 at 12:27 pm ကျတော်ဖွင့်နေတာ ၂လလောက်ရှိပြီ မရဘူး
Reply အောင်မိုး says: March 12, 2013 at 2:52 pm viber,tango call လိုက်ရင် ဘာမှမကြားရဘူး ကိုယ်ပြောတာသူတို့မကြားရဘူးဘယ်လိုလုပ်မှလဲ ကူညီပါအုံး
Reply moewingyi says: March 24, 2013 at 7:29 am viber မြန်မာဗားရျင်းက ဖုန်းတိုင်းအတွက်အဆင်ပြေလားအစ်ကို
Reply Kyaw Ye says: March 26, 2013 at 2:06 pm ကောင်းတယ်ဗျာ…. တကယ်အသုံးတည့်မယ့် viber လေးပါ.. viber အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ သူတွေ့အဖို့ အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့….
Reply Hein says: March 31, 2013 at 1:37 am viber Myanmar App link သေနေတယ်။PLz…ပြန်တင်ပေးပါဦး………….။
Reply Linn Paing says: May 23, 2013 at 9:19 pm viber အကောင့်လုပ်ပြီး uninstall လုပ်လိုက်တာ ခုပြန်သုံးတော့ code ပြန်မပို့ဘူး အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရလဲ သိရင်ပြောပေးကြပါ အခု မြန်မာ version ကရောဖုန်းတိုင်းသုံးရလားသေချာသိချင်ပါတယ်ဗျာ
Reply စာချစ်သူ says: July 13, 2013 at 6:31 pm Viber Myanmar Version to download link >>> http://www.mediafire.com/download/gcjb6rkd8102bsd/Viber-v2.3.1.62.ipa
Reply minmawsoe says: December 23, 2013 at 2:25 pm download link is not working
Like Us On Facebook! MMSD Group ကိုလာခဲ့ပါ။ © 2014 Myanmar Mobile Software Developer. WordPress Theme by ဖြိုးချမ်း.